Akhriso:-Wararkii ugu dambeeyay ee xaalada degmada Walaweyn
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Walaweyn ayaa waxaa ay sheegayaan in weli rasaas goos goos ah laga maqlayo gudaha degmadaas,isla markaana ay ishor-fadhiyaan maleeshiyadkii dagaalamay.
Wariyeyaal ku sugan degmada Walanweyn ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalka uu markii hore ka bilaawday Bar-koontorool oo ku taalla Galbeedka degmadaas,hayeeshee markii dambe uu kusoo faafay gudaha degmada,isla markaana xaaladu ay tahay mid kacsan.
In kastoo haatan uu socon dagaal toos ah ayaa hadan waxaa lagu soo waramayaa in labada dhinac ay dalbanayaan gurmad kala duwan,isla markaana laga cabsi qabo in dagaalka uu markale dib u bilaawdo.
Degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa Maanta ka duwan sidii hore,waxaana laga dareemayaa jawi kacsanaan, iyada oo dadka deegaanka qaarkood ay bilaabeen inay ka fogaadaan meelaha u dhow halka uu dagaalka ka dhacay.
Dagaalka ka dhacay degmada Walanweyn ayaa salka ku haya aargoosi aano qabiil,waxaana horay xal uga gaaray Xildhibaano ka tirsan golaha Shacabka oo degmadaasi tegay wallow saakay uu markale dagaalka dib u qarxay.